MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardDirect Debit Service - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Direct Debit Service By Bank
MPT Postpaid Service ဖြစ်သော (PSTN/ Mobile/ ADSL/ IPStar ) နှင့် FTTH သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် MPTနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဘဏ်များတွင် သုံးစွဲသူ ကိုယ်စားပေးဆောင်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုအားလျှောက်ထားပြီး လစဉ်ကျသင့်ငွေများကို ပေးချေနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
လစဉ် ဘဏ်များမှ သုံးစွဲသူ၏ Bank Account ဖြင့် ပေးဆောင်ရမည့်ငွေများကို ကိုယ်စားပေးဆောင်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်/ မန္တလေး/ နေပြည်တော်/ ဧရာဝတီ/ မကွေး နှင့် မွန်ပြည်နယ် မှ Postpaid Service များအား ပေးဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူများမှ ဘဏ်တွင် ဘဏ်စာရင်း တစ်ခု ဖွင့်လှစ်၍ မိမိ ဝန်ဆောင်မှု ရယူလိုသော Postpaid Service နံပါတ်နှင့်အတူ စာရင်းသွင်း လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဘဏ်မှ လစဉ်ကျသင့်ငွေ နှင့် အတူ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခအား သုံးစွဲသူ ၏ ဘဏ်စာရင်းမှ လစဉ် ဖြတ်တောက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဘဏ်စာရင်းတွင် ငွေလက်ကျန် မလုံလောက်၍ ငွေသွင်းရန် လိုအပ်ပါက သုံးစွဲသူများထံသို့ ဘဏ်များမှ အကြောင်းကြား ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဘဏ်စာရင်း စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် ဘဏ်စာရင်း ၏ ငွေသွင်း/ငွေထုတ် စာရင်းများ (Bank Statement ) ကို လစဉ်ဝန်ဆောင်မှု ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
MPT Postpaid Service တွေက ဘာတွေလဲ?
MPT Postpaid Service များဖြစ်သော PSTN (အော်တိုကြိုးဖုန်းများ)/ GSM/ CDMA/ ADSL/ IP Star နှင့် FTTH Dome Pyan Home Fiber Internet အားလုံး ပါဝင်ပါသည်။
MPT မှ လစဉ်ကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာများကို သုံးစွဲသူများ ထံသို့ E-invoice ဖြင့်ရယူရန်စာရင်းသွင်းထားသည့် SMS နှင့် Email များမှ တစ်ဆင့် ပေးပို့ပေးသွားပါမည်။
ထို့အပြင် MPT ၏ ငွေပေးချေမှု တိုင်းအတွက် လက်ခံရရှိသည့် အတည်ပြုစာများကို အသိပေးပေးပို့သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
လစဉ်ငွေတောင်းခံလွှာများအား ပေးချေနိုင်ရန် နီးစပ်ရာ MPT ၏ ငွေလက်ခံကောင်တာများ၊ စာတိုက်များ၊ ဘဏ်များ ဖြစ်ကြသည့် KBZ, CB , AYA (Quick pay/ Mobile banking/ Internet banking) များမှ တစ်ဆင့်လဲ ပေးချေနိုင်ပါသည်။
ဘဏ်မှ ကိုယ်စား ဖုန်းဘေလ် ပေးချေခြင်း ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန်အတွက် ဘယ်လို စာရင်းပေးသွင်းရမလဲ?
ဘဏ်စာရင်း တစ်ခု အနည်းဆုံး ဖွင့်လှစ်ရမည် ဖြစ်သည်။ (အသုံးပြုလျှက်ရှိသော ဘဏ်စာရင်း ရှိပါက ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်ရန် မလိုပါ။) ဘဏ်တစ်ခုခြင်းအလိုက် လုပ်ငန်းစဉ် ကွဲပြားမှု ရှိနိုင်ပါသည်။
ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန် မှတ်ပုံတင်နှင့် အတူ ကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ပြီး ထို ဘဏ်စာရင်းနှင့် အတူ ဘဏ်မှ အလိုအလျှောက် ဖုန်းဘေလ် ပေးချေခြင်း ဝန်ဆောင်မှု ရယူလိုသော MPT ဆားဗစ်နံပါတ်အား ဘဏ်တွင် စာရင်းပေးသွင်း၍ လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်သည်။
လျှောက်ထားသည့် ရက်နှင့် အနီးဆုံး လစဉ်ကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာအား ဘဏ်မှ စတင် ပေးဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ဘဏ်မှ အလိုအလျှောက် ဖုန်းဘေလ် ပေးချေခြင်းဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်သော
ဘဏ်များနှင့် ဘဏ်ခွဲ အမည်များ
(၁) ရန်ကုန် ဘဏ်ခွဲ (၁)
အမှတ် (၄၃ ၊ ၄၅) ပန်းဆိုးတန်းလမ်း ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
(၂) ရန်ကုန် (၂)
အမှတ် (၂၇) ပန်းဆိုးတန်းလမ်း ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
(၃) ရန်ကုန် (၅)
လသာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့် ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အမှတ်(၁၆၆/၁၆၈)၊ မြေညီထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အမှတ်(၃၉၄/၃၉၆)၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(အထက်)၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အမှတ်(၃၀)၊ ဘုန်းကြီးလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အမှတ်(၁၆၈)၊ သီရိရတနာအဆင့်မြင့်ဈေး၊ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။
အမှတ်(၅၁၉) ၊ပြည်လမ်း ၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
အမှတ်(၁၅၁) ၊ (၈၀)လမ်း ၊ (၂၈)လမ်းနှင့်(၂၉)လမ်းကြား ၊ ဟေမာဇလ ရပ်ကွက် ၊ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
MPT Postpaid Service တစ်လုံးချင်းစီ၏ လစဉ်ဘေလ်ပေးဆောင်မှုအတွက် ဘဏ်မှ ဝန်ဆောင်ခ ကောက်ယူသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
လစဉ်ကျသင့်ငွေများအား ပေးဆောင်ရမည့် သတ်မှတ်ရက် မကျော်လွန်မှီ ပေးဆောင်ပေးခြင်း။
ဘဏ်စာရင်း ငွေလက်ကျန် မလုံလောက်ပါက သုံးစွဲသူထံ အကြောင်းကြားပေးခြင်း။
ဘဏ်စာရင်း ငွေသွင်း/ငွေထုတ် အား စစ်ဆေးနိုင်ရန် လစဉ် Bank Statement ထုတ်ပေးခြင်း။
အမေးများသော မေးခွန်းနှင့် အဖြေများ
(၁) ဘဏ်မှ ကိုယ်စား ဖုန်းဘေလ် ပေးချေခြင်း ဝန်ဆောင်မှု အတွက် ဘယ်သူတွေ လျှောက်ထားနိုင်လဲ?
Postpaid service ဖြစ်သည့် PSTN (အော်တိုကြိုးဖုန်းများ) /CDMA /GSM /ADSL /IPStar နှင့် FTTH Dome Pyan Home Fiber Internet သုံးစွဲပြီး လစဉ်ကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာ လက်ခံရရှိသူများသည် အလိုအလျှောက် ဖုန်းဘေလ် ပေးချေခြင်း ဝန်ဆောင်မှု အား လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
(၂) မည်သည့် Postpaid Service များကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသလဲ?
(၃) ဘဏ်မှ ကိုယ်စား ဖုန်းဘေလ် ပေးချေခြင်း ဝန်ဆောင်မှု ကို ဘယ်လို လျှောက်ထားနိုင်သလဲ ?
ဘဏ်မှ ကိုယ်စား ဖုန်းဘေလ် ပေးချေခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူရန် ဘဏ်စာရင်းတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ပြီး မိမိအသုံးပြုသော MPT Postpaid Service နံပါတ်နှင့် အတူ စာရင်းပေးသွင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
(၄) MPT Postpaid Service တစ်လုံးထက် ပိုမို လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား?
(၅) ဘဏ်က ဘယ်လို ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးတာလဲ?
(၆) ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထား ဘယ်လောက်လဲ?
ဘဏ်အလိုက် ဝန်ဆောင်ခ ကွဲပြားမှု ရှိနိုင်ပါသည်။
(၇) ဘဏ်စာရင်းကို ဘယ်လို စစ်ဆေးနိုင်မလဲ?
ဘဏ်မှ လစဉ် ငွေသွင်း/ငွေထုတ် ဘဏ်စာရင်း (Monthly Bank Statement) အား သုံးစွဲသူများ စစ်ဆေးနိုင်ရန် အတွက် ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၈) လစဉ်ကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာကို ဘယ်လို စစ်ဆေးနိုင်မလဲ?
သုံးစွဲသူမှ လစဉ်ကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာအား စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် E-invoice အား လျှောက်ထား ရယူနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး လစဉ်ကျသင့်ငွေတောင်းခံအလွှာများကို SMS (သို့) Email မှတစ်ဆင့် ရယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
လျှောက်ထားလိုပါက https://einvoice.mpt.com.mm/register သို့ ဝင်ရောက်ပြီး စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။